The Ab Presents Nepal » प*क्राउ परेका रविलाई नभेट्ने, नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नेलाई नेताहरु लाइन लागेर उँ बसेको ठाउँमै पुग्नेलाई के भन्नु ?
प*क्राउ परेका रविलाई नभेट्ने, नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नेलाई नेताहरु लाइन लागेर उँ बसेको ठाउँमै पुग्नेलाई के भन्नु ?
नेपाली राजनीतिमा को देश भक्त हो र को कुर्ची भक्त त्यो कसैले छुट्याउन सक्दैन । अहिले देश रबि र सालिकरामको विषयले आन्दोलित भइरहेको छ तर पनि कुनै राजनीतिक दलले खुलेर आआफ्नो पक्ष राखेको छैन । तर भारतीय मन्त्री जसले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएकोमा भारतमा विदेश मन्त्रीको पद पायो त्यो नेपाल आउँदाको विषयले नेताहरु उफ्रिराखेका छन् ‘।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट्नको लागि नेताहरुले कुटनितक मर्यादा र स्वाभिमानलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार एक ट्वीट गर्दै उनले फेरि एक पटक देउवा (शेर बहादुर देउवा), भट्टराई (बाबुराम भट्टराई) तथा यावदले (उपेन्द्र यादव)ले लम्पसारवादको नमुना पेश गरेको भन्दै अति भयो भनेर लेखेका थिए ।
यसको जवाफमा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईले थापालाई ट्वीटमार्फत नै जवाफ फर्काएका छन् । थापाको ट्वीटमाथि कमेन्ट गर्दै भट्टराईले लेखेका छन् ‘सिसाको घरमा बस्नेले अर्काको झुपडीमा ढुंगा हान्नु हुँदैन भन्ने लोकोक्ति मेरा सहपाठी मित्रले स्मरण गर्नु राम्रो होला । सुगौली सन्धियताका शासकले भित्र दिल्लीको चाकरी गर्ने र बाहिर राष्ट्रवादको डंका पिटेर जनता ठग्ने विरासत तोड्दै हामी छिमेकीसँग देशको हितमा खुला सम्बन्ध राख्ने पक्षमा छौं |
भट्टराईको उक्त कमेन्टपछि थापाले जवाफमा लेखेका छन् ‘खुला मित्रतापूर्ण सम्बन्धवारे मेरो मित्रको धारणासंग सहमत छु।त्यस्तो सम्बन्ध समानता,स्वाभिमान र मर्यादाभित्र रहोस् र सुगौली सन्धिपछि धेरै लामोसमय कायम आत्मसमर्पण अन्तहोस् भन्ने मेरो मान्यता हो।सम्मानित पूर्वप्रमले एक विदेशी मन्त्रीलाई उसकै होटलमा औपचारिकरुपमा भेटेको अलि सुहाएन कि’ ?